Ngoba imikhumbi, okwakukhona ngobuqhawe ikakhulukazi, enza combat ohambweni ngoxhaxha isiRashiya kwakuwulimi unongorwana okhethekileko - flag eSt George sika elalisemagcekeni esikebheni. Wayengumuntu umkhosi St Andrew, yafakwa maphakathi isihlangu heraldic nge red Georgiem Pobedonostsem, abangcwele lwezincwadi zeBhayibheli. ezimbili kuphela imikhumbi emlandweni ngoxhaxha wathola ilungelo ukuba le ndondo yesibindi sabo futhi amakhono abo - umkhumbi "Azov" kanye uBrigadier "Mercury". Akekho omunye sathola indondo esiphakeme kangaka.
Ukuze ukuthi kokubili imikhumbi sathola indondo omkhulu onjalo
Izenzo amatilosi ukukhonza emikhunjini, babe kwamambala kuyakufanelekela ifulege umklomelo eSt George: "Azov" owayevelele e impi ye Navarino, lapho isikhathi eside igcinwe ulwa kanyekanye imikhumbi isitha esinamandla ezinhlanu; "Mercury" uye inqobe izihlakaniphi umdlalo amabili imikhumbi Turkey ukuthi wathatha bokuphakama okuphindwe kayishumi inani izibhamu. Bobabili imikhumbi kanye nabasebenza zabo izinduna, Lazarev Mikhail Petrovich futhi Kazarskim Aleksandrom Ivanovichem, ngokulandelana, embozwe ngokwabo ngenkazimulo elingabuniyo, kanye nezenzo zawo kwakufanele abalulekile kakhulu. Kodwa St George amafulegi "Azov" futhi "Mercury" Ifa wadlulela imikhumbi owalandela, okuyinto njalo wayala ukuba lasemanzini Russian - "Memory of Mercury" futhi "Memory of Azov".
St George sika ifulege umlando kunanoma
St George iribhoni - elula-ngemibala emibili iribhoni edumile imiklomelo Russian - St George wasebusika, eGeorge esiphambanweni Order of St George. kudabuke St George sika njengoba ukugqokwa amatilosi cap yakhe, uma ngakhonza namatilosi omkhumbi, ngubani waklonyeliswa St George ifulege. Tape lalisetshenziswa njenge-elementi igama elifanayo kanye amabhanela njengenhlangano accessory futhi esezingeni banner. Engakaze lisetshenziswe noma yimuphi umklomelo yiSoviet kwaze kwaba ngo-1992, lapho-oda abuyiselwe yesiphambano St George kanye St George. Nokho, lo tape lalisetshenziswa sangaphambili sokuba e amabutho White ku St George imiklomelo e Russian Corps waba sibonelo we opholile wase-USSR imiklomelo - izindondo "Ukuze Ukunqoba phezu eJalimane", Order of Inkazimulo Guards tape. Futhi kubikwa kuka George libhekene itheyiphu ifulege: impahla yayo - ijezi Maka (emgwaqweni), 115 g / m 2, 100% i-polyester, 35 mm ngezansi kushaft usayizi ephaketheni - 0.9 x 1.35 m.
Umlando uhlamvu bokulwa yemikhumbi Russian
Peter mina ngo-December 1699 wasungula ifulege Andrew njengoba olusemthethweni Navy Russian. UMbusi wachaza choice yakhe ngenxa yokuthi "babhapathizwa kusukela lo mphostoli Russia." flag White ne cross esiluhlaza St Andrew ezazinyakaziswa ukuba 1917 imikhumbi Russian insika ngonyaka. Ngaphansi kwalo is ukuzulazula emhlabeni wonke, sathola emazweni amasha, waya empini ezizukulwane eziningana amatilosi. Wonke umuntu uyazi umlando amazwi induna ukuba amatilosi phambi iyiphi impi: "C uxhumane ifulege St Andrew kanye noNkulunkulu." Kusukela 1692 kuze kube ngo-1712 Emperor Petru 1 ifulege siqu ngesineke amaphrojekthi eziyisishiyagalombili, zonke zazo ngokulandelana athathwa ngoxhaxha. Ngakho-ke, ukulandisa yesishiyagalombili futhi engeyokugcina lachazwa kulandela Petru 1: ". White Maka, zitholakale kuwo engu- Andrew, anibizela Russia" Kuyinto kuleli fomu eSt George sika flag of St Andrew futhi wahlala Navy Russia uNovemba 1917.
Ubufakazi imvelaphi isiRashiya, St Andrew (St George sika) ifulege
Ubufakazi kungenzeka yini St Umphostoli - abavikela East Orthodox - Peter Ngachitha oda wokuqala Russian. Lo myalo, St. Andrew njengoba umklomelo eliphezulu kakhulu uhulumeni waseRussia esungulwe inkosi 1698 ukuvuza ngokuba umphakathi kanye nezenzo ezempi. Sasiphathelene engu- zegolide, iribhoni eluhlaza okwesibhakabhaka, uhlobo esiliva izinkanyezi eziyisishiyagalombili enamaphoyinti namaketanga egolide. Maphakathi inkanyezi, esidayisa salo ukhozi ezimbili esinamakhanda, ethwele imiqhele ezintathu, ukhozi esifubeni sakhe - cross St Andrew okwesibhakabhaka. Ngakho-ke, akunakwenzeka ukuthi umbusi Russian wayecabanga emasikweni Scotland, lapho sekuyisikhathi eside kubhekwe umPhostoli Andreya ongumvikeli wasezulwini yakhe. Peter mina, naphezu ezilula ezihlobene nobudala bakhe, negama lakhe, okokuqala yezwakalisa ukukhathazeka kwayo ubukhulu namandla Russian. Kusukela 1819 imikhumbi zihlukaniswa ngokwabo empini, baqala ukwabela eSt George ifulege.
Imininingwane mayelana eSt George ifulege
Indaba yakhe iqala ngo-1813. Umuzi Kulyma ehlobo lika ukuthi ihlukane ngonyaka ngaphansi kobuholi Ukubala Osterman-UTolstoy sekwandile yomzimba French Marshal Vandam futhi lesi senzo ukulondolozwa ibutho umbimbi, badonswa, baphuma naseDresden. Kwaba impi ezinzima. Won Russian. Iqembu kwaba kanye Marine Guards, ngubani waklonyeliswa St George ifulege. Kodwa awuzange ibonakale amafulegi lwemikhumbi. Lokhu basilungisa Tsar u-Alexander I esinqumweni 06.05.1819 ngonyaka. Kusukela manje kuqhubeke, Guards waqala kuhluke St George pennants. Entwasahlobo ka-1918 ukuvelela ifulege Andrew on shumbi weRiphabhulikhi Soviet wanqamuka. Ngo-December 1924, benza, nezitsha iWhite Guard. Januwari 17, 1992 uhulumeni waseRussia uye wanquma ukubuyela St Andrew / eSt George ifulege isimo esidala - Navy ifulege Russian. Kwakuthinta ngayingcwelisa Petersburg. 26.07.1992 ngonyaka odlule yaphakamisa ifulege zase-USSR, in inkazimulo ngokuthi yiMpi Enkulu Yobuzwe. Ngaphansi liculo yaseSoviet Union kazwelonke wayiswa isitoreji unomphela enduneni. Khona-ke ngaphansi liculo we Russian Federation yaphakamisa ifulege of St George.
Drama - iyona esikhundleni nhlekelele?
Baphi abantu abaphile emhlabeni?
Ukupholisa Ephoqelekile efulethini: izinhlobo kanye ukufakwa ohlelweni
Ukukhetha okungcono Cyprus ehhotela ngemindeni nezingane